How to Build Yourself when Things get stressful
Home / How to Build Yourself when Things get stressful
🔹 “ဘဝရဲ့ ကျရှုံးမှု အများစုဟာ အောင်မြင်မှု ဆီကို ဘယ်လောက် နီးစပ်နေပြီဆိုတာ မသိဘဲ လက်လျှော့လိုက်မိတာပဲ” လို့ သောမတ်စ် အက်ဒီဆင် က ဆိုခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။
🔹ကျွန်တော်တို့က အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေ နဲ့ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ရင်ဆိုင်လာရပြီဆို ကိုယ် ဘယ်လောက် စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်နေပါစေ စွန့်လွှတ်လိုက်တတ်ကြတယ်။ ဘယ်လောက် ပင်ပန်းမှု ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အားမျိုးမမွေးတော့ဘဲ အလွယ်တကူ လက်မြှောက် အရှုံးပေးလိုက်ကြတယ်။
🔹 မြန်မာစကားမှာရှိတဲ့ ပြဿနာပေါင်း တစ်သောင်းခြောက်ထောင် ဆိုတဲ့ စကားကို ဟာသ တစ်ခုအနေနဲ့ ဆိုတတ်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းကျ မိသားစုရေး၊ လူမှုရေးတွေအပြင် ကိုယ်နေ့စဉ် နာရီပေါင်းများစွာ ကျင်လည်နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင်းမှာပါ စိတ်ဖိစီးစရာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဆိုတာ တစ်ခုမကဘဲ အမြဲလိုလိုရှိနေတတ်တာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီလို စိတ်ညစ် စိတ်ပျက်စရာ အခက်အခဲတွေ ဆိုတာတွေနဲ့က ရှောင်လွှဲနေလို့ကို မရတာပါ။ ချက်ချင်းရုတ်တရက် ကျော်ပစ်လိုက်လို့ မရပေမယ့် ဒီလို အချိန်တွေ ရောက်လာတိုင်း အကောင်းဆုံး ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ ပြင်ဆင်ထားလို့ ရပါတယ်။
🔹 ဆိုတော့ ဒီလို အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ အလွယ်တကူ ပြိုမလဲ မိအောင် ကိုယ်တိုင် ဘယ်လို self-motivated ဖြစ်အောင် နေမလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လို တွန်းအားပြန်ပေးကြမလဲ ?
ဒီဆောင်းပါးလေးကို ၂ မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးခင်ဗျ။
👉 ဘာကြောင့် ဆိုတာ သိပါစေ။
တခါတလေ ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ ဖြစ်တယ် ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာထက် ဘာကြောင့် ရင်ဆိုင်သင့်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေရောက်အောင် ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိ ရင်းနှီးခဲ့သလဲ ဘာကြောင့် ကြိုးစားခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင် ပြန်ရှာဖွေခြင်းက အကောင်းဆုံးသော Motivation ပါပဲ။
အခက်အခဲ အတော်များများက Plan ကောင်းကောင်းမရှိတာကနေ စကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်က လက်တွေ့ဘဝမှာ ဘယ်လောက် ကြီးကြီး သေးသေး၊ အခက်အခဲဆိုတာကလည်း မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ ဘယ်လို Plan မှ မရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက်ဆိုတာ အိပ်မက်သက်သက်ပါ။ Step by Step အစီအစဉ်တွေ ရှိနေသရွေ့ ကျွန်တော်တို့ လက်လျှော့ဖို့ မတွေးမိပါဘူး။
👉 ပြဿနာဟောင်းတိုင်းအတွက် ဖြေရှင်းချက် အသစ်ရှိနေပါစေ။
တူညီတဲ့အခက်အခဲတိုင်းအတွက် မတူညီတဲ့ ခွန်အားက လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အများစု စိတ်ဓာတ်အကျဆုံးအချိန်ကိုပြပါဆို ကိုယ် ကြိုးစားထားသလောက် ဒီ အခက်အခဲကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြုံတွေ့နေရတာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်လို အခက်အခဲ စိတ်ညစ်စရာတိုင်းအတွက်ဆို စိတ်သစ်လူသစ် ခွန်အားအသစ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရာ ကိုယ်တိုင်လည်း အတွေးအခေါ်အသစ် ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
👉 ကိုယ်နိုင်သလောက်ဝန်ပဲ ထမ်းတတ်ပါစေ။
အခက်အခဲ ပြဿနာအများစုက မနိုင်ဝန်ထမ်းရာကနေ စတာပါ။ ၁၀၀ ရောက်ဖို့ကို ကျွန်တော်တို့ ၁ ကနေ စ ရေတွက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရည်မှန်းထားတာတွေကို ဘယ်အချိန်အတွင်း ဘယ်လောက်ထိ ကြံ့ကြံ့ခံ ရုန်းကန်နိုင်သွားမလဲ ဆိုတဲ့ ပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲခြားပြီးမှ ရှေ့ဆက်လျှောက်ပါ။
ကိုယ့်အခက်အခဲ ပြဿနာက ဘာဆိုတာသိနေရင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ရှာပါ။ နည်းလမ်းတွေ့တဲ့အခါ အခြားအရာတွေကို ဦးစားပေးနေတာမျိုး ဝေ့ဝိုက်နေတာမျိုး မလုပ်ဘဲ Move Fast Fail Fast ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ မြန်မြန် ဖြေရှင်းပြီး လွှတ်ချပစ်လိုက်တာပါ။ ဒီ စိတ်ဓာတ်မျိုးကို ကျင့်သုံးလာတာများရင် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆို စိတ်သက်တော့သက်သာနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်လာတာကို လက်တွေ့ ကြုံတွေ့ရမှာပါ။
ဒီလို အခက်အခဲ ပြဿနာတွေနဲ့ စိတ်ညစ်စိတ်ပျက်နေရတိုင်း ကိုယ့်ကို ဖိအားပေးနေတတ်တဲ့အကြောင်းအရာက ဘာများလဲ ? အချိန်အတော်ကြာ မဖြေရှင်းနိုင်ဘဲ စိတ်ဒုက္ခ ခံနေမိတာက ဘယ်လို ကြောင့်လဲ? ဒီလို အရာတွေကို အရင်ဆုံ းရှောင်ဖယ်တတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာ လှမ်းချင်တဲ့ လမ်းတလျှောက်ဖြစ်လာမယ့် ဆူးခလုတ်ကို ကြိုတင်ဖယ်ထားမှ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းသွားလားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလည်း သင့်ခြေလှမ်းတွေ ရှေ့ဆက်ဖို့ အားအင်တစ်ခုပါပဲ။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ချင်စိတ်ရှိနေတာက အကောင်းဆုံးသော Motivation ပါ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်ထဲက အတိုင်း အမှန်တကယ် ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ကို တွန်းအားပေးနိုင်ရင် ပေးနိုင်သလောက် ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုးမဆို ကြံ့ကြံ့ ခံနေနိုင်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေက သက်သေပါပဲ။ စိတ်ကူးယဉ်ပါ။ စိတ်ကူးကို ပုံဖော်ပါ။ လက်တွေ့မှာ ကြိုးစားပါ။
🔹 ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေဆိုတာက မဖြစ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် မဟုတ်ပါဘူး။
အခက်အခဲ ပြဿနာဆိုတာတွေကို ရင်ဆိုင်ရဲရင် ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်လို့ရတဲ့ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်တွေပါ။
🔹 ဒီအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အားအင်တွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဆိုတာ ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်မှာပဲ ရှိနေတာပါ။ ဒါကြောင့် ရှာဖွေပါ။ သိမ်းထားပါ။ ကျင့်သုံးပါ။
ဘာမဆို လက်တွေ့ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။